ऋणबाट मुक्त हुन घरको यो स्थानमा राख्नुहोस मयुरको प्वाँख ! – Online Khabar 24
मयुरको प्वाँखलाई पुजनीय र पवित्र मानिन्छ ।
भगवान श्रीकृष्णले टाउकोमा सधैं मयुरको प्वाँख धारण गर्ने भएको हुनाले पनि धार्मिकतासँग मयुरको प्वाँख जोडिएको हो ।
मयुरको प्वाँख राख्नाले सौभाग्य ल्याउने धार्मिक विश्वास छ । वास्तुशास्त्रका अनुसार मयुरको प्वाँख घरमा राख्दा हुने फाइदाहरु धेरै छन् । जुन विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।यदी कुनै जरुरी काम पूरा हुँदाहुँदै रोकिएको छ भने आफ्नो बेडरुमको पूर्वीदक्षिण दिशामा मयुरको प्वाँख राख्नुहोस् ।
यसले रोकिएको काम पुरा हुनेछ ।यदि तपाईको पैसा कहीँ अड्किएको छ अर्थात तपाईले ऋण दिएर उक्त ऋण उठेको छैन भने पनि मयुरको प्वाँख घरमा राख्नले ऋण उठ्ने विश्वास गरिन्छ ।
यसैगरी यस्ता विभिन्न संकेतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिन्छ : धर्म शास्त्र जीवनमा विभिन्न काल ख ण्ड मा आउने विभिन्न संकेतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिने धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
Prevकहिल्यै प्रयोग नगर्नु अरुको यी ६ चिज ! भाग्यनाश र धनहानि हुन्छ !
nextगंगा जस्तै पवित्र हुन्छन् यी राशिका युवती,कहिलै सोच्दैनन् कसैको कुभलो !